Zaridainan’Anosy Lasa misy mpivarotra na tsy andro alakamisy aza
Izay ilay efa nahiana, lasa mpivarotra isan-karazany, toy ny hani-masaka, ranom-boankazo sy tsakitsaky ,
kiraro ao anatin’ny zaridainan’Anosy na dia tsy andro alakamisy aza, araka ny hita teny ny zoma sy ny sabotsy teo. Milaza ireo mpivarotra ireo fa tsy maintsy miasa mba mitady izy satria izay ilay asa fitadiavana. Tsy manda ny fanadiovana mihitsy izahay fa tokony hojeren’ny mpitantana vaovao ny kaominina kosa ny hametrahana anay, hoy izy ireo satria mamelom-bady aman-janaka, mandoa hofan-trano isam-bolana izahay.Misy fotoana moa tonga eny an-toerana mandroaka ireo mpivarotra ny mpitandro filaminana, saingy rehefa dify izy ireo dia miverina ihany ireo mpivarotra. Ny mampanahy amin’ity resaka ity dia tsy ho ireo mpivarotra nesorina teny Mahamasina noho ny asa fanamboarana ny kianja ihany no ho avy eny Anosy fa mpivarotra vaovao sy hafa mihitsy, ary raha tsy misy ny vahaolana sy fanapahan-kevitra raisina haingana dia ho lasa tsena be ny ao an-jaridainan’ny farihin’Anosy, izay efa nohajariana mba ho toerana madio sy maitso mavana hahafahana makamaka aina. Mazava ho azy fa ho avy manaraka ny fitombon’ny mpivarotra sy ny loto.